နယူးဂေါက်သီးဘောလုံး: Pro ကိုစျေးဆိုင်များတွင်ဆိုက်ရောက်ရဲ့အဘယျသို့ထွက် Check
အားကစားဆိုင်ရာ ဂီယာ & ပစ္စည်း
ဂေါက်သီးဘောလုံးလောကီသားတို့သည်အသစ်ကဘာလဲ? ဂေါက်သီးစျေးဆိုင်များတွင်တက်ဖေါ်ပြခြင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဂေါက်သီးဘောလုံးခြေရာခံကိုသိမ်းဆည်းထားပါ, ဒါမှမဟုတ်စင်ပေါ်သိမ်းထားဖို့မကြာမီလာမယ့်။ ကျနော်တို့စျေးကွက်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဈေးနှုန်းအစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်ဘောလုံးမှာပစ်မှတ်ထားဘောလုံးကိုခြေရာခံ။ ပိုသစ်သောဂေါက်သီးဘောလုံးထိပ်မှာပေါ်လာ: ကျွန်တော်ကြားလျှင်, သင်ကအကြောင်းနားထောင်လော့။
Titleist ကနေအသစ် AVX ဂေါက်သီးဘောလုံးအကွာအဝေးလိုသူဂေါက်သီးမှာပစ်မှတ်ထားသော်လည်းပျော့ခံစားမှုနှင့်အမှတ်ပေးထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူနေကြသည်။ ဒါဟာ Pierce, ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုကောင်းတဲ့ကစားသမားများကပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းအနိမ့်လမ်းကြောင်းများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်, အနိမ့်တဲ့ compression core ကိုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Titleist AVX ဘောလုံးအဖြူနှင့်အဝါရောင် လာ. , ရှည်ဂိမ်းကလပ်ကအရမ်းနိမ့်လှည့်ဖျားချွတ်ထုတ်လုပ်ရန်အင်ဂျင်နီယာနေကြသည်။
အဆိုပါ AVX ဘောလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ချိနှစ်တွင်အကြာတွင်လာမယ့်အတူဧပြီ 23, 2018 မှစ. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ရရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ အဆိုပါမြေပုံတစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 48 ဖြစ်ပါတယ်။ titleist.com
Titleist ခရီးစဉ်ဖျနှင့်နှုန်း & Models
Titleist ကနေ 2018-မော်ဒယ်ခရီးစဉ်ဖျဂေါက်သီး။ Acushnet ကုမ္ပဏီ
Titleist က၎င်း၏နှုန်းဂေါက်သီးဘောလုံးနှင့်လှည့်လည်ဖျဂေါက်သီးဘောလုံး၏ 2018 မော်ဒယ်များနှင့်အတူထွက်သည်။ အဆိုပါဂေါက်သီးဘောလုံးများ၏အမည်များဆိုလိုသကဲ့သို့, Tour ဖျ, ခံစားမှုအပေါ်မှာပိုပြီးအကွာအဝေး၏ search အတွက်ဂေါက်သီးမှာနှုန်းအာရုံစိုက်တဲ့သူဂေါက်သီးဖို့ပစ်မှတ်ထားဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့်ပြောလှည့်လည်ဖျပိုကောင်းဂေါက်သီး, mid- ဖွငျ့နှုန်းနှင့်အဆင့်မြင့်-handicappers ခြင်းဖြင့်ပိုမိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်ဖျဘောလုံးနှစ်ဦးစလုံးအဖြူနှင့်မြင့်မားသော-optic အဝါရောင်အရောင်လာနှင့်တစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 35 တစ်ခုသည့် MAP ရှိသည်။
ရိုးရာအဖြူရောင်, VISI-White က (ကက high-မြင်သာဗားရှင်း), နှုန်း Orange နှင့်နှုန်းပန်းရောင်: အဆိုပါနှုန်းဘောလုံးလေးခုအရိပ်ထဲမှာလာကြ၏။ 12 နှုန်းဘောလုံးတစ်သေတ္တာများအတွက်သည့် MAP $ 27 ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအင်ဖိုအတွက် titleist.com သွားရောက်ကြည့်ရှု။
Snell MTB Black နဲ့ MTB နီဂေါက်သီးဘောလုံး
Snell ဂေါက်ကွင်းမှနောက်ဆုံးဘောလုံးဇန်နဝါရီ 2018 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိသည့် MTB Black နဲ့ MTB နီမော်ဒယ်များဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ MTB က Black ယင်း၏ urethane အဖုံးပေါ်တွင်တစ်ဦး 360 ချိုပုံစံနှင့်အတူတစ်ဦး 3-အပိုင်းအစဘောလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်း Snell MTB ဘောလုံးကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, MTB က Black ကုမ္ပဏီ Lower အကွာအဝေးတိုးတက်မှုများအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုချွတ်လည်ကပြောပါတယ်တဲ့ 7-ရာခိုင်နှုန်းက lower-ချုံ့ core ကိုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ MTB နီ 338 ချိုနှင့်အတူ 4-အပိုင်းအစဘောလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကားမောင်းသူနှင့်ရှည်လျားသောသံရိုက်ချက်များအပေါ်တစ်ဦးကိုနူးညံခံစားရှိပါတယ်, ဒါပေမဲ့တိုတောင်းသံကိုချွတ်ခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်ပတ်လည်ပျော့ပြောင်းပြီးခံစားခြင်းနှင့်ပိုမိုမြင့်မားလှည့်ဖျားနှုန်းထားများထိန်းသိမ်းထားသည်။
အဆိုပါ MSRP 12 တစ်သေတ္တာများအတွက် $ 31,99 ဖြစ်၏ အဆိုပါ MTB နီအဖြူအပြင်အဝါရောင်လာပါတယ်။ (snellgolf.com)
Bridgestone ခရီးစဉ် B ကိုစီးရီး
ဂေါက်သီးဘောလုံး၏ Bridgestone ရဲ့ခရီးစဉ် B330 လိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာဘောလုံးအတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့အထင်ကရဖြစ်ခဲ့သည်။ မရှိတော့ပါ။ Bridgestone ဂေါက်သီးစောစောအောက်တိုဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင်စတင်လေးမော်ဒယ်များအတွက်အသစ်အလှည့်လည် B ကိုစီးရီးဘောလုံးနှင့်အတူ B330 လိုင်းအစားထိုးထားသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ် BX နှင့်လှည့်လည် B ကို XS နိမ့် handicappers များအတွက်ဘောလုံးဖြစ်ကြပြီးအသီးသီး, အ B330 နဲ့ B330-S ကမော်ဒယ်တွေအစားထိုးလိုက်ပါ။ (ထို B330 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) ပျော့ပြောင်းပြီး urethane အဖုံးနှင့်တိုးတက်ပျံသန်း, Bridgestone သည်ဤဘောလုံး greenside လှည့်ဖျားများတွင်တိုးတက်မှုများပူဇော်ပြောပါတယ်, သူတို့ရဲ့အရင်ကျော်ခံစားရနှင့်အကွာအဝေး။
အဆိုပါခရီးစဉ် B ကို RX နှင့်လှည့်လည် B ကို RXS ဂေါက်သီးဘောလုံးတစ်ခု optimized ဒုံးကျည်သွားလမ်းနှင့်ပိုပြီးအကွာအဝေးလိုသူနှစ်လယ်ပိုင်းမှအနိမ့်မသန်မစွမ်းဂေါက်သီးရည်ရွယ်နေကြသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ် B ကစီးရီးအတွက်အားလုံးလေးယောက်မော်ဒယ်များ $ 45 / တစ်ဒါဇင်၏ MSRPs နှင့်အတူအောက်တိုဘာ 2, ပေါ်ရောင်းစတင်ဖို့။ bridgestonegolf.com
2017 Srixon Q-စတား
Srixon ဂေါက် "ကပိုပြီးတာရှည်ခံ, 2-piece အဒီဇိုင်းကနေအများဆုံးဖွင့ ်. ရှာသောကစားသမားများအတွက်ဂေါက်သီးဘောလုံးကို ... ။ " သူ့ရဲ့ 2017 မော်ဒယ် Q-စတားဂေါက်သီးဘောလုံးကိုခေါ်ဆို
ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဘောလုံးကိုတစ်ဦး lower- အပါအဝင်အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ခရီးစဉ်ဘောလုံးပေါ်တွင်တွေ့ရသော Srixon နည်းပညာအချို့များပါဝင်သည် ချုံ့ core ကို, "လည်အရေပြား" အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်တစ်ဦးဒီဇိုင်း ချိုပုံစံ ။
ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုတာရှည်ခံအပြင်ဘက်အလွှာနှင့်အတူတစ်ဦး 2-အပိုင်းအစဆောက်လုပ်ရေးအတွက်လာပါတယ်။ အသစ် Srixon Q-စတားဘောလုံးတစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 24,99 တစ်ခုသည့် MAP နှင့်အတူသြဂုတ် 18, 2017 ရက်တွင်လက်လီမှာရှိနိုင်ပါဖြစ်လာသည်။ သူတို့ကအဖြူသို့မဟုတ်အဝါရောင်လာကြ၏။ ပိုပြီးအင်ဖိုအတွက် srixon.com ကိုကြည့်ပါ။
အပြာရောင်ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုဖြတ်ယူပါ။ ဂေါက် Cut
cut ဂေါက်သီးရိုက်စေသည်တဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးစျေးကွက်နှင့်စားသုံးသူရန်၎င်း၏ဂေါက်သီးဘောလုံးတိုက်ရိုက်ရောင်းချပါတယ်။ အဆိုပါ middleman ထွက်ဖြတ်တောက်ခြင်းနိမ့်စျေးနှုန်းတွေကိုဆိုလိုသည်။
ထိုအဖြတ်ဂေါက်သီး, 2-piece အဖြတ်အနီရောင်ကနေ entry ကိုအဆငျ့ဘောလုံးကို, တစ်ဒါဇင်နှုန်းသာ $ 9,95 များအတွက်ရောင်းချပါတယ်။ အဆိုပါဖြတ်အဖြူရောင်တစ်ဦး 3-အပိုင်းအစဘောလုံးကို $ 14,95 / တစ်ဒါဇင်ဘို့လည်းရှိပါတယ်။
အခုဖြတ်အပြာရောင်, အဖြတ်ဂေါက်သီးက်ဘ်ဆိုက် (cutgolfco.com) ရက်နေ့တွင်တစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 19,95 မှာစျေးနှုန်း 4-အပိုင်းအစ, urethane ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုလာပါတယ်။
"ဂေါက်သီးအရည်အသွေးကိုဂေါက်သီးဘောလုံးအဘို့အမျိုးစုံ options များယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းများမှာယခုရှိပါတယ်သတိထားမိနေကြတယ်" ဟုဖြတ်ဂေါက်သီးတည်ထောင်သူတည်ထောင်သူဆမ် Uisprapassorn ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့ Kirkland ထိုးမြဲလက်မှတ်ဘောလုံးကိုနှင့်အတူကိုမွငျလြှငျအဆိုပါဖြစ်ရပ်ဆန်းဂေါက်သီးကတခြားကြောက်မက်ဘွယ်ရွေးချယ်စရာထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်သဘောပေါက်, သူတို့သည်တော့ဘူးတစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 50 ပေးချေရန်မလိုပါကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ Srixon Q-စတား Tour ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုအလယ်အလတ်လွှဲအမြန်နှုန်းနှင့်အတူဂေါက်သီးရည်ရွယ်သော်လည်း "Tour-caliber" ဂေါက်သီးဘောလုံးကိုလိုသူဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ယင်းလှည့်ဖျားစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်သာ Higher-လွှဲမြန်နှုန်းဂေါက်သီးရည်ရွယ်ဘောလုံးတွင်တွေ့မြင် greenside ထိန်းချုပ်မှုကမ်းလှမ်းသောဘောလုံးကို။
Srixon အဆိုပါလျှော့ချအပေါ်အာရုံစူးစိုက် တဲ့ compression rating အလယ်အလတ်လွှဲအမြန်နှုန်းနေဆဲကောင်းသောအကွာအဝေးစွမ်းဆောင်ရည် generate ကိုကူညီပေးပါသော။ ကြောင်းကျော်တစ်ဦးပျော့ပြောင်းပြီးခံစားပြီးပိုလှည့်ဖျားထိန်းချုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း Srixon ရဲ့ "လည်အရေပြား" အပေါ်ယံပိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦး urethane အဖုံးဖြစ်ပါသည်။
အတော်များများက Srixon ဘောလုံးမျိုးစုံအရောင်ကိုကမ်းလှမ်းပေမယ့် Q-စတားခရီးစဉ်သာအဖြူရောင်ကြွလာနေကြပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 29.99 တစ်ခုသည့် MAP နှင့်အတူ, ဧပြီ 14, 2017 ရက်တွင်မြောက်အမေရိကလက်လီဆိုင်များတွင်ရောက်ရှိ။ srixon.com
သိပ္ပံ-Core အလေ့အကျင့်ဘောလုံးခြောက်လ၏အင်္ကျီလက်အတွက်လာ။ NuPro ဂေါက်သီးရိုက်ထုတ်ကုန်များ Facebook ကနေတဆင့်
ဂေါက်သီးလေ့ကျင့်ချင်ပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်အာကာသရှိသည်မဟုတ်လော သငျသညျဖြစ်ကောင်းတိုတောင်းသောအကွာအဝေးပျံသန်းဖို့ဒီဇိုင်းအလေ့အကျင့်ဘောလုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပျက်စီးမှုလုပ်နေတာရှောင်ရှားရန်တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အခုဆိုရင်သိပ္ပံ-Core ခေါ်ကဏ္ဍသစ်တစ်ခု entry ကိုအဲဒီမှာဖွင့် (- SCI-core ကုမ္ပဏီကအားလုံးကိုထုပ်ကရှင်းလင်းပြောပြ) ။
သိပ္ပံ-Core အလေ့အကျင့်ဘောလုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ် 100 ကိုက်မှာ max မှထွက်တည်ဆောက်ရသေးနှစ်ဦးစလုံးမှအစအိမ်တွင်းသုံးစွဲဖို့အလုံအလောက်လုံခြုံဖြစ်ခြင်းစဉ်အစစ်အမှန်ဂေါက်သီးဘောလုံး၏ခံစားပုံတူပွားနေကြသည်။ သင့်ရဲ့လူနေမှုအတွင်းပိုင်း, အခန်းပင်။
သူတို့ကိုနောက်ကွယ်ကကုမ္ပဏီသူတို့တစ်တွေ) ပြတင်းပေါက်များကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ်မိန့်တော်မူ၏ သို့မဟုတ်ခ) နံရံများသို့မဟုတ်ပရိဘောဂအပေါ် scuff အမှတ်အသားများထားခဲ့ပါ။ သူတို့ကအစ, ကုမ္ပဏီပြောပါတယ်, ကားများသို့မဟုတ် home တွင်မှကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သူတို့ဟာ clubface ချွတ်တဲ့ pop ထုတ်လုပ်ရန်ပြည်တွင်းရေးဖိအားနဲ့နို့ဆီပေါ်လီမာရေမြှုပ်ဆောက်လုပ်ရေးရှိသည်။ သူတို့ကတကယ့်ရှိတယ် ချိုပုံစံ နှင့်ဘောလုံးအလေးချိန်ကိုမှန်ကန်အကြမ်းဖျင်းတစ်ဝက်သောအရာကိုဂေါက်သီးချိန်။ သူတို့က float, ဒါကြောင့်သင်ရေထဲကနေသူတို့ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်တယ်, နှင့် deforming သို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုလအတွင်းမှတဆင့်ကွဲအက်ကိုဆီးတားရန်တည်ဆောက်ရသည်။
သိပ္ပံ-Core အလေ့အကျင့်ဘောလုံးကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်, swingcoachclub.com အပေါ် $ 14,95 မှာစျေးနှုန်း 6-pack ကိုအင်္ကျီလက်များတွင်ရောင်းချကြသည်။
တစ်ခု elixir တစ်ဦးမှော်ဆေးဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ်ပါမယ်ဖို့အသုံးပြု alchemists သောပစ္စည်းဥစ္စာကိုရွှေသို့သည်အခြားသတ္တုများလှည့်။ တစ်ဦး ELIXR OnCore ကနေအသစ်တခုဂေါက်သီးဘောလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ခုနှစ်, OnCore ELIXR ကုမ္ပဏီ၏ပထမဦးဆုံး "ခရီးစဉ်ဘောလုံးကို" ပိုကောင်းတဲ့ဂေါက်သီးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုထိန်းချုပ်မှုများနှင့်ခံစားရှာကြံမည်သည့်ဂေါက်သီးများအတွက်ကုမ္ပဏီထိပ်တန်းလိုင်းဘောလုံးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးကိုအတွက်သုံးအလွှာတစ် polybutadiene ရော်ဘာ core ကို, သတ္တု-ထုံမွှန်း ionomer ဝတ်လုံများနှင့်သွန်း urethane ဖုံးဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ ချုံ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် 85 ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ ELIXR ဘောလုံးလက်ရှိတွင်ကုမ္ပဏီ website တွင်တစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 40 မှာစာရင်းသွင်းဖော်ပြထားပါသည်။
Srixon Z-စတားနှင့် Z-စတား XV
2017 ဂေါက်သီးဘောလုံး၏ Srixon ရဲ့ Z-စတားလိုင်းများ၏မော်ဒယ်များ။ Srixon
ဂေါက်သီးဘောလုံး၏ Srixon ရဲ့ Z-စတားစီးရီးဟာ 2017 မော်ဒယ်များ၏နိဒါန်းနှင့်အတူ၎င်း၏ပဉ္စမမျိုးဆက်ဝင်။ သူများသည်နှစ်ခုမော်ဒယ်များ - Z-စတားနှင့် Z-စတား XV - ကျွမ်းကျင်ဂေါက်သီးရည်ရွယ်သည်ဟု High-end ဘောလုံးအဓိပ်ပာယျ, "ခရီးစဉ်စွမ်းဆောင်ရည်" ဘောလုံးဖြစ်ကြသည်။
Z-စတားဘောလုံး၏ယခင်ကြားမှာနှိုင်းယှဉ်လျှင်, Srixon အမှတ်ပေးရိုက်ချက်များ (- တစ်နည်းအတွက်လှည့်ဖျား, တိုတောင်းချဉ်းကပ်မှုနှင့် greenside ရိုက်ချက်များ) အပေါ်ခံစားခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်အသစ်ကမော်ဒယ်တွေအတွက်တိုးတက်မှုများနှင့်ဒီဇိုင်းအပြောင်းအလဲကပြောပါတယ်။
အဆိုပါ 2017 မော်ဒယ် Srixon Z-စတားဘောလုံးအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားချက်?
အဆိုပါ Z-စတားအကွာအဝေးနှင့်ခံစားဒါပေမယ့် greenside လှည့်ဖျားနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်တစ်ဦးအာရုံနှင့်အတူပေးပါသည်။
အဆိုပါ Z-စတား XV greenside ထိန်းချုပ်မှုပေးပါသည်နှင့်အကွာအဝေးပေါ်တစ်အာရုံနှင့်အတူခံစားကြရသည်။
နှစ်ဦးစလုံးဘောလုံးနှင့်အတူဖေဖော်ဝါရီလ 17, 2017 ရက်တွင်မြောက်အမေရိကအတွက်ရရှိနိုင်ဖြစ်လာ Maps တစ်ဒါဇင်နှုန်း $ 39,99 ၏။ srixon.com
ဆန်းစစ်ခြင်း: Cleveland HiBore XLS Monster ယာဉ်မောင်း
ဂေါက်ပစ္စည်းကိရိယာ: အ Market ကတွင်နှင့်သိခုနှစ်တွင်
ဂေါက်ဆက်စပ်ပစ္စည်း: အသင်တန်းအမှတ်စဥ်များအတွက်၎င်း၏ Goodies အတွက်နောက်ဆုံး
မြွေဟောက်ဘုရင်က Forge Tec နှင့် Forge ရဲ့သမဝါယမ / MB အထိ Combo သံသတ်မှတ်ပေးသည်
တပတ်ရစ် Skis ရောင်းဖို့ကိုဘယ်လို
မိန်းကလေးများအများအားဖြင့်အဖြူရောင်ပုံစကိတ်စီးခြင်း Wear; ယောက်ျားလေးများက Black Wear
ဂေါက်အိတ်: Beginners နှင့်ဝယ်သူများအဘို့တစ်ဦးကလမ်းညွှန်
စက်ရုပ်ဂေါက်သီးလက်အိတ်အဆစ်ဆငျးရဲဒုက်ခအပေါ် ကျော်လွန်. မူရင်းအာရုံစိုက် Expand
2016 ခုနှစ်တွင် Watch 10 Rapper
10 Rap ဂီတ Hits နှင့်သူတို့၏ Ghostwriters
VBScript - အဆိုပါစနစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့ဘာသာစကားကို - အပိုင်း 1
Pillbugs အကြောင်း 10 စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်အလက်
'' Seguro '' အသုံးပြုခြင်း
ကော်နဲလ်ကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
စပိန်ကြိယာ "Poner" Conjugate ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါ Capricorn က Man ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကိုဘယ်လို